“लोभले लाभ, लाभले विलाप” • Anumodan National Daily
“लोभले लाभ, लाभले विलाप”
इमो फोन कलबाट ठगिएका युवक भन्छन्– अरू नठगियुन्
प्रकाशित मिति : 7th December 2018
धनगढी । “तपाईंलाई ४० लाख रुपैयाँको लट्री परेको छ” बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका लक्ष्मण बोहरा सामाजिक सञ्जाल ‘इमो’ मा नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन सुनेर तीनछक्क परे । उनलाई विश्वासै लागेन । उनले कतै आफू निद्रामा सपना पो देखिरहेको छैन भनेर आफैंलाई चिमोटे । दिउसै रहेछ । उनलाई ‘इमो’ मा आफ्नो नाम रवि बर्मा बताउने व्यक्तिले फोन गरेका थिए ।
“००९२३०७५९१४०११ नम्बरको फोनबाट आएको कल यही एउटा वाक्य भनेर काटियो” लक्ष्मण भन्छन्– “केही बेर म फोनको बारेमा सोच्दै थिए । एकछिनपछि फेरि अर्को नम्बर ००९२३४८३८८१३७९ बाट फोन आयो ।” फोन गर्ने व्यक्तिले भन्यो– “तपाईंलाई परेको लट्रीको रकम लिन तपाईंले हामीलाई ३० हजार रुपैयाँ पठाउनु पर्छ ।” अब भने लक्ष्मणलाई के गरु झैं भयो । उनमा लाखौं रुपैयाँको लोभ जाग्यो । उनले घरमा आमालाई त्यसबारे जानकारी गराए । आमाले ‘त्यत्रो रकम पाइने भने ३० हजार रुपैयाँ दिनु के ठूलो कुरा भयो र ? लक्षणले अनुमोदनसँग भने– “त्यसपछि मैले आमासँगै ३० हजार रुपैयाँ मागेर नेपालको सिराहा जिल्लामा बस्ने प्रविणराज पाण्डेको नाममा गत १६ गते आइएमइ गरेर पठाए ।”
लक्ष्मण ४० लाख रुपैयाँ पाएपछि भविष्यमा गर्ने योजना बनाउन थाले । बिहीबार धनगढीको एउटा होटलमा अनुमोदनसँग भेटिएका लक्ष्मणले घटनाको बेलीविस्तार सुनाए– “म ४० लाख रुपैयाँ कहिले प्राप्त हुन्छ ? भन्ने प्रतीक्षामा थिए । अर्कोदिन पुन: सोही नम्बरबाट फोन कल आयो । हतार–हतारमा फोन उठाए । तर, उताबाट फेरि मलाई ५० हजार तीन सय रुपैयाँ पठाउन भनियो । मैले एकछिन यो सबै मलाई कतै ठग्ने प्रपञ्च त होइन भन्ने सोचे । मैले शंका गरेको चाल पाएर होला फोन गर्ने व्यक्तिले मलाई यसअघि यस्तै लट्रीबाट अरूले पाएको लाखौं रकमको चेक र रकम पाउने व्यक्तिहरूको विवरण पठायो । मलाई विश्वास भयो । अनि मैले गत १७ गते सिराह घर भएका विष्णु महराका नाममा ५० हजार तीन सय रकम पठाए ।” उनले इमोबाटै रकम पठाएको आइएमई नम्बर त्यो व्यक्तिलाई टिपाएका थिए ।
लक्ष्मण रकम पाउने प्रतीक्षामा थिए । तर, फेरि गत मंगलबार (१८ गते) उनीसँग उताबाट थप रकम माग भयो । लक्ष्मणलाई फेरि ४० हजार रुपैयाँ पठाउन भनिएको थियो । अब उनलाई धेरै शंका लाग्यो । उनले आफ्ना साथीहरूलाई यसबारे जानकारी गराए । उनका साथीहरूले ‘तलाई ठगिरहेका छन्’ भनेर सम्झाए । “तर, मैले उताबाट अरूलाई रकम दिएको फोटो, अडियो र चेक हेर्दा ठगि होइन भन्ने ठाने र बुधबार फेरि थप ४० हजार रुपैयाँ राजेन्द्रप्रसाद सिंहको नाममा पठाए” उनले अनुमोदनसँग भने ।
४० लाख रुपैयाँ पाउने लोभमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ गुमाइसकेका लक्ष्मणको सबै आशा त्यतिबेला भताभुंग भयो, जतिबेला उनीसँग उताबाट फेरि ३० हजार रुपैयाँ माग गरियो । “४० लाख पाउने लोभमा यति रकम गुमाए” उनी भन्छन्– “तर अब त्यो रकम पाउने आशा पूर्णरूपमा मरिसक्यो ।”
सामाजिक सञ्जाल ‘इमो’ मा अपरिचित व्यक्तिले दिएको लट्रीको लोभका कारण एक लाख २० हजार रुपैयाँ गुमाएका लक्ष्मण भन्छन्– “४० लाख त के कुरा अब मैले पठाएको रकम नै कसरी फिर्ता होला ?” उनले यो ठगिबारे प्रहरीमा समेत उजुरी नदिने बताए । “मैले रकम गुमाइसके, अब प्रहरीमा उजुरी दिएर के होला र ?” लक्ष्मणले भने– “यसरी अब अरू कोही नठगियुन् भनेरमात्र तपाईं (सञ्चार माध्यम) लाई जानकारी दिएको हुँ ।”